ဂူဂဲလ်၏ရှာဖွေမှုရလဒ်များသို့မည်သို့သွားနိုင်မည်နည်း - Semalt က SEO Tool အသစ်တစ်ခုကိုပေးသည်
လူသားမျိုးစိတ်များတိုးတက်မှုတစ်ခုစီတိုင်းနှင့်အတူစီးပွားရေးလောကသည်နည်းပညာအသစ်၏အားသာချက်ကိုယူရန်အကောင်းဆုံးအနေအထားကိုရှာတွေ့နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာကြီးသည်အင်တာနက်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုလျင်မြန်စွာပေးပို့နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုစတင်မိတ်ဆက်သောအခါစီးပွားရေးလောက၏ဥက္ကtech္ဌများသည်ပါးရည်နပ်ရည်ကျွမ်းကျင်သည့်ပညာရှင်များနှင့်အတူတက်ကြွခဲ့သည်။ သို့သော်သေးငယ်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေဖြင့်သင်သည်တစ်စုံတစ်ယောက်အားလျင်မြန်စွာ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်ငွေရေးကြေးရေးစွမ်းရည်တူရှိချင်မှရှိလိမ့်မည်။ Ahrefs သို့မဟုတ် Ubersuggest ကဲ့သို့သော SEO (Search Engine Optimization) tool ကိုသင် ၀ ယ်ယူနိူင်သည်၊ သို့သော် အကယ်၍ သင့်တွင်သူတို့၏အချက်အလက်များကိုအသုံးချရန်ဗဟုသုတမရှိပါကထိုအရာများသည်အကုန်အကျများနိုင်သည်။
ဒီတော့ဘတ်ဂျက်ကိုသတိပြုမိတဲ့အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကကမ္ဘာ့ဘတ်ဂျက်လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့ဘယ်လိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်မလဲ။ Semalt ၏အပ်နှံထားသော SEO Dashboard ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်! ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကသင့်အားဒိုမိန်းတစ်ဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာသာပေးဆောင်နေစဉ် Ahref နှင့် Ubersuggest တွင်ရှိသောအရည်အသွေးတူအချက်အလက်များကိုပံ့ပိုးပေးသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်သင့်အား Dedicated SEO Dashboard ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုအခြေခံပြီးဖော်ပြသွားပါမည်။
"SEO ဆိုတာဘာလဲ။ မင်းကိုပြောတာက Search Engine Optimization ကိုဆိုလိုတာပဲ" ဟုသင့်ကိုသင်မေးနေကြောင်းကျွန်ုပ်သေချာပါသည် ထိုအလွန်ကြီးစွာသောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်! Search Engine Optimization သည်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအကြောင်းအရာအရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သုံးစွဲသူအသွားအလာ၏အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက်ကိုတက်ကြွစွာတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တစ်ခုစီသည်သန်းပေါင်းများစွာသော crawlers များအားသူတို့၏ထင်မြင်ချက်အားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိသောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်ပို့သည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသူတို့ဖတ်သည့်အခါ၎င်းတို့ကိုတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ဝင်ရောက်စေချင်သည်။ သင့်အကြောင်းအရာတွေကိုသူတို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရနိုင်လေလေ၊ သူတို့အင်ဂျင်ကိုသင်ရနိုင်လေလေ။ ထို့အပြင်သူတို့သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသူတို့တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားနေခြင်းကြောင့်သူတို့သည်သင့်အကြောင်းအရာများကိုမကြည့်ဟုမဆိုလိုပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ထို crawlers များကသင်၏စာမျက်နှာသို့သူတို့ကိုပို့ဆောင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်၊ နောက်မှသွားသောဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြည့်ရှုမည် သင်၏စာမျက်နှာ၊ keyword ပေါ်တွင်သိပ်သည်းမှု၊ အခြေခံသဒ္ဒါနှင့်အကြောင်းအရာများ၊ စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်းစာစီစာရိုက်ခြင်းစသည်တို့ကိုသူတို့ထားခဲ့ပါ ... ဤစာရင်းသည်အမြဲတမ်းတည်ရှိနေနိုင်သည်!
crawlers မှစုဆောင်းရရှိသောသတင်းအချက်အလက်သည်ဗဟိုအချက်အချာသို့သွားသောကြောင့်၎င်းသည်သင်၏သော့ချက်စာလုံးများနှင့်ကိုက်ညီသည့် crawlers စုဆောင်းထားသည့်အခြားအကြောင်းအရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်ဗဟိုအချက်အချာသည်သင်၏စာမျက်နှာအား“ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာ” ကိုဆိုလိုသည်။ ဒီရမှတ်ကသော့ချက်စာလုံးရှာဖွေမှုရလဒ်မှာဘယ်ကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးရမှတ်များသည်ပထမစာမျက်နှာတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်လည်းစစ်ထုတ်ပြီး SERP ရမှတ်လျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်သင်အမြင့်ဆုံးရထားသောဖန်တီးထားသောအကြောင်းအရာများကိုအာရုံစိုက်ချင်သောကြောင့်၊ သော့ချက်စာလုံးရှာဖွေမှုရလဒ်၏ပထမစာမျက်နှာတွင်သင်ပေါ်လာနိုင်သည် - ၎င်းသည် SEO အောင်မြင်မှု၏အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းပေါ်တွင်လက်ရှိရရှိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးနှင့်အတူဤအရာသည်အလွန်ခက်ခဲသောအလုပ်တစ်ခုနှင့်တူသည် - သန်းပေါင်းများစွာသောအလှူရှင်များနှင့်ပြည့်နေသောလယ်ကွင်းတွင်အကောင်းဆုံးအဖြစ်သင်မည်သို့ရှုမြင်နိုင်မည်နည်း။ လက်ျာကိရိယာများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်! သင်၏နယ်ပယ်၌ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်၊ Semalt Dedicated SEO Dashboard သည်သင်၏ခိုင်မာသော SERP ရမှတ်သို့ရောက်ရန်သင်အသုံးချနိုင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Ahrefs သို့မဟုတ် Ubersuggest ကဲ့သို့သောအခြားကိရိယာများနှင့်မတူဘဲ Dedicated SEO Dashboard သည်သင်လေ့လာရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်။
အပေါ်ကပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းသင်ကြည့်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုပြိုကွဲစေမယ့် link များစွာရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီ၏ဘေးတွင်အရောင်အသွေးစုံသည့်အစက်များကိုလည်းသင်တွေ့လိမ့်မည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုတိုးတက်အောင်ကူညီရန် Dedicated SEO Dashboard အသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အစက်တစ်ခုစီသည်အရောင်သုံးမျိုးအနက်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည် - အစိမ်းသည်ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ထိုinရိယာသို့သွားရန်ကောင်းသောဖြစ်သည်၊ လိမ္မော်ရောင်သည်သင်တိုးတက်မှုအချို့ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်၊ အနီရောင်သည်သင်ချက်ချင်းကြည့်သင့်သည်ကိုဆိုလိုသည်။
အသုံးပြုသောဒုတိယနည်းလမ်းမှာအပေါ်ကပုံတွင်ဖော်ပြထားသောမြို့ပတ်ရထားရာခိုင်နှုန်းပြဇယားဖြစ်သည်။ ရာခိုင်နှုန်း 100-0 ကနေအရွယ်အစားဖြစ်ပါတယ်။ 100-90 သည်သင်၏ဝဘ်ဆိုက်သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်ကိုဆိုလိုသည်။ 89-50 ဆိုသည်မှာသင်၏ဝဘ်ဆိုက်သည်ခိုင်မာသော်လည်းအချို့သောတိုးတက်မှုများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ နှင့် 50-0 ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်လုပ်စရာများစွာရှိသည်။
အကယ်၍ သင်စွဲနေရင်၊ ညာဘက်ထောင့်ရှိ bubble icon ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Semalt ရဲ့ SEO ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ကိုသင်ချက်ချင်းမေးနိုင်သည်။ ဤညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိ Dedicated SEO Dashboard တွင်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် - ဘာသာစကားကူးပြောင်းသူနှင့်ဆိုင်းအင်အင်ခလုတ် - ကိရိယာနှစ်ခုကိုဖော်ပြထားသည်။
ဘာသာစကားခလုတ်သည် Dedicated SEO Dashboard ကိုပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိရရှိနိုင်သည့်ဘာသာစကား (၁၁) ခုထဲမှတစ်ခုသို့ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ ဤကိရိယာကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူတို့ထံလက်လှမ်းမီအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း။ သင်၏အကောင့်ကိုဖွင့်ရန်နှင့်ဝင်ရောက်ရန်အတွက်နည်းလမ်းသုံးခု - ဂူဂဲလ်ဖြင့်ဝင်ပါ၊ Facebook ဖြင့်ဝင်ပါသို့မဟုတ်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် Google သို့မဟုတ် Facebook ကိုအသုံးပြုပါက Dedicated SEO Dashboard သည်ထိုအကောင့်မှသက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်ယူပြီးသင့်အတွက်ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို Semalt ဖြည့်ခြင်းနှင့်သင်အဆင်မပြေလျှင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့ ်၍ သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီခလုတ်နှစ်ခုလုံးဟာအွန်လိုင်း application ပေါင်းစုံမှာစံသတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်ပြီး Semalt ကသူတို့ကို Dedicated SEO Dashboard ထဲကိုအသုံးချပြီးသင်နဲ့ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်မှုရှိစေတယ်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် SEO နှင့် ပတ်သက်၍ ကြိုတင်သိရှိထားခြင်းမရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး အားကူညီရန်စာမျက်နှာတိုင်းတွင်“ View the Page Guide” ဆိုသည့်အချက်သုံးချက်ပါသောအပြာရောင်ဘားတစ်ခုရှိသည်။
"နောင်မဟုတ်ပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" သည်ထို option ကိုသင့်ထံမှဖယ်ရှားလိမ့်မည်။ နောက်မှ "နောက်မှ" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်ပေါ်လာသည့် Lightbulb အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုရယူနိုင်သည်ကိုနောက်ပိုင်းမှသင့်အားအသိပေးလိမ့်မည်။ ပွင့်လင်းလမ်းညွှန်ခလုတ်သည်သင့်အားထိုစာမျက်နှာမှတင်ပြမည့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်။ သငျသညျသော်လည်းအာရုံကိုပေးဆောင်နေကြသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ, ဤ option ကိုသင်တစ်ချိန်ကသာရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်လေ့လာနေစဉ်မှတ်စုများယူရန်အကြံပေးလိုပါသည် ကံကောင်းတာက, ဒီလမ်းညွှန်များကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကြသည်ဟူ။ ၎င်း, စာမျက်နှာပေါ်ရှိနောက်တစ်ခုသို့သင်ပြောင်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်သင်နောက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ယခုကျွန်ုပ် Semalt ၏အထူး SEO Dashboard ကိုတရားဝင်တင်ပြခွင့်ပြုပါ။ သင်မှတဆင့်ရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးခြင်းငှါအဘို့အရွေးချယ်စရာရှစ်ရှိပါတယ်။
၎င်းသည်မက်ထရစ်ကိုပြောင်းလဲစရာမလိုပဲစီမံကိန်းတစ်ခုမှအခြားတစ်ခုသို့လျင်မြန်စွာခုန်နိုင်သည်။ ဤနည်းဖြင့်သင်၏စီးပွားရေးနှင့်ပြိုင်ဘက်တစ် ဦး အကြားရွေးချယ်နိုင်သည်။ အိုး၊ မင်းရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုဒီကိရိယာပေါ်မှာကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ပြောဖို့မေ့နေခဲ့သလား။ မင်းလုပ်နိုင်လို့ပဲ ၎င်းသည်သင်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်သူမည်သူမဆိုထက်ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းကျော်နေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
၎င်းသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်စာရင်းကဲ့သို့မိမိကိုယ်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည် - သင်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်စာရင်းကိုနေရာချသည့်နေရာဖြစ်သည်။ သင်သည်တစ်ကြိမ်တွင်ဒိုမိန်းတစ်ခုထားနိုင်သည်၊ ဒိုမိန်းပေါင်းများစွာကိုတစ်ပြိုင်နက်ထည့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာမှဒိုမိန်းစာရင်းတစ်ခုကိုတင်နိုင်သည်။ သင်၏ရှာဖွေမှုများကိုကျဉ်းမြောင်းစေရန်အတွက်ဒိုမိန်းများနှင့်သော့ချက်စာလုံးများကိုပင်ခွဲခြားနိုင်သည်။
ဤသည်ကသင့်အား Dedicated SEO Dashboard တွင်သင်အကောင်အထည်ဖော်သော domain အားလုံး၏အမြန်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုပေးသည်။ ဤခြုံငုံသုံးသပ်ချက်သည်သင့်အားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုညွှန်ကြားရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ဥပမာတစ်ခုပေးဖို့အတွက်ငါ YouTube နဲ့ TikTok ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ဗွီဒီယိုပလက်ဖောင်းနှစ်ခုနဲ့ Dashboard ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ဒီနမူနာနဲ့အတူ YouTube ဟာ TikTok ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုတာထင်ရှားတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီပလက်ဖောင်းတွေနဲ့သင်ယှဉ်ပြိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ဒီမှာသင်ခန်းစာများစွာယူနိုင်ပါတယ် - YouTube ကသင်၏သော့ချက်စာလုံးများကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုရန်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းကိုပြလိမ့်မည်။
မည်သည့်လမ်းကြောင်းကိုသွားပါစေအကြောင်းအရာတစ်ခုစီသည်သင့်အားထိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာနက်နက်နဲနဲပေးမည့် link တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီသည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ထိုသီးခြားပစ္စည်း (ဥပမာ၊ သော့ချက်စာလုံးများရှိသော့ချက်စာလုံးများရွေးချယ်စရာ) သည်မည်သို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကိုပြသရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤအချက်အလက်များကိုသင်မှန်ကန်စွာအသုံးပြုပါက၊ သင့်တွင်ဖောက်သည်များပုံမှန်စီးဝင်လာလိမ့်မည်။
အထက်ပါအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ရွေးချယ်မှုသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသရန်နှင့်အဆင့် ၅ ပိုင်းခွဲခြားနိုင်သည်။
သင်လုပ်ဆောင်နေသည် (အောင်မြင်သောစာရင်းစစ်) သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများကို (အမှားနှင့်သတိပေးချက်များ) ကိုကြည့်နိုင်သည်။ လူတိုင်းမြင်နိုင်သောအရာကိုပင်သင်ကြည့်နိုင်သည် (အခြေခံအချက်အလက်များ) ။
၎င်းသည် Page Uniqueness နှင့် Website Uniqueness ဟူသောနည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုစလုံးသည်သင်၏ပါဝင်မှုသည်မည်မျှထူးခြားကြောင်းနှင့်သင်၏သော့ချက်စကားလုံးအသုံးပြုမှုသည်မည်မျှထိရောက်သည်ကိုကြည့်နေသည်။ အဓိကကွာခြားချက်မှာ Page Uniqueness သည်သီးခြားစာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်တွင်အာရုံစိုက်ပြီး Website Uniqueness သည်သင်၏“ Keywords in TOPS” ရာခိုင်နှုန်းကို site တစ်ခုလုံးကြည့်သည်။
ဤကဏ္ section သည်သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုမတူညီသောစက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အချိန်မည်မျှကြာသည်ကိုကျော်သွားသည်။ အမှားအားလုံးကို“ Error to Fix” အောက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။
သီးခြားလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုစီရှိသည့်ကွဲပြားသောကဏ္ sections ငါးခုရှိသည်။
Create Report - သင့်အားအကောင်အထည်ဖော်ထားသော parameter ၏အခြေခံအားဖြင့်သင်အစီရင်ခံစာကိုပေးသည်။
Delivery Schedule ကိုဖန်တီးပါ။ "Create Report" တွင်ဖန်တီးထားသောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပါ။
ပေးပို့ဖြန့်ဝေခြင်းအချိန်ဇယား - လူများထံအီးမေးလ်ပို့ရန်။
White Label Template: သင်၏အစီရင်ခံစာများကိုကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါ။
Delivery Template: သင်၏အီးမေးလ်အစီရင်ခံစာများကိုကိုယ်ပိုင်
Semalt ရဲ့ အပ်နှံ SEO ဆိုသည်မှာ Dashboard သေးငယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်သည်ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးပါ ၀ င်သည်။ ထိရောက်သော SEO tool တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်အားအစီရင်ခံစာများကိုမည်သို့အမြန်ဆုံး ၀ င်ငွေရနိုင်မည်နည်း၊ ဒိုမိန်းအမည်တစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၁၀ စျေးနှုန်းအတွက်သင်၏ SERP ရမှတ်များ၏ရလဒ်များကိုလျင်မြန်စွာတိုးမြှင့်နိုင်သည်၊ သို့မှသာသင်နှစ်သက်သောဖောက်သည်များနှင့်ပိုမိုထိတွေ့နိုင်သည်။